सुष्माको आर्तनाद कसले सुन्ने ? – Tulsipur Khabar
June 1, 2020 June 2, 2020 LeaveaComment on सुष्माको आर्तनाद कसले सुन्ने ?
युट्युबरले उनको एकोहोरो बद्नाम गरिरहेको छ । उनको प्रोफाइलबाट छानिछानी पिक्चर सार्वजनिक गरिएको छ । आज भएजति दोष सबै उनको थाप्लोमा हालेर रमाइरहेका युट्युबरहरु सजायको भागिदार हुने कि नहुने ?
मन परेकी युवतीलाई लिनका लागि रातारात रुकुम उक्लिएका नवराज बिकसहितका केही युवा भेरीमा फ्याँकिए,मारिए । यो मानवतामाथिको नृशंस प्रहार हो । यसलाई जात,धर्म,लिंग र रंगका दृष्टिले हेर्ने प्रबृत्ति मानवीय छैन । अर्कातिर,नवराजहरु जो युवतीलाई लिएर फर्किने योजनाका साथ त्यहाँ पुगेका थिए, ती युवती आफ्ना बाबुआमासहित प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएकी छन् ।
तर,यसो भनेर सुषमा मल्ल ठकुरीको मानवअधिकार शून्यमा झर्दैैन, झरेको छैन, झर्न दिनु हुँदैन । नवराजको मोबाइल भेरीमा डुब्यो । सुषमाको मोबाइल प्रहरीले राखेको छ । युट्युबरहरुले भ्युअर्स बढाउने नाममा सुषमाले ‘मलाई लिन हुल बाँधेर आऊ’ भनेको भन्दै एउटा अडियो भाइरल बनाएका छन् ।
न्युनतम् मानवीय मर्यादा पनि पालना नगर्ने ती युट्युबरहरुलाई जतिसुकै शव्दमा खेद व्यक्त गरे पनि अपुरो हुन्छ । किनभने, उनीहरु आफ्नो भ्युअर्स बढाउने र पैसा कमाउने नाममा यति अन्धो छन् कि, गर्न हुने र नहुने कुराको पनि ख्याल गर्दैनन् । एकातिर नवराज र उनका साथीहरुको शव जलिरहेको छ, अर्कातिर युट्युबरहरु शोकमग्न,बिमार बाबुको अन्तर्वार्ता लिइरहेका छन् ।
अर्कातिर,यस्तो अमानवीय घटना सर्वथा निन्दनीय हुन्छ । तर, यही घटनालाई लिएर दलितका नाममा अर्को राजनीति शुरु भएको छ । दलित भएका कारण बढी सजायँ कम वा बढी हुने होइन । कसुर जे हो, त्यस आधारमा कानुनले निर्धारण गरेको सजायँ दोषीले पाउनुपर्छ । दोषी पहिल्याउने काममा प्रशासनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । र,कोही निर्दोषलाई यसमा मुछिएको,शंका गरिएको छ भने निर्दोषको न्यायनिम्ति पनि लड्नुपर्छ ।
तर,हौवाबाजीको शैलीमा घटना अगाडि बढाइएको छ । सुषमाको घर अनकन्टार जंगलको बीचमा छ । नवराजहरुलाई भेरीमा फ्याँक्ने र ज्यान जाने तहको कसुर गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनुपर्छ र कडा सजायँ हुनुपर्छ भनिरहँदा बेकसुरहरु यसमा पर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै चनाखो हुनु जरुरी छ ।
June 23, 2020 June 24, 2020 Tulsipur Khabar
April 17, 2020 May 13, 2020 Tulsipur Khabar
November 2, 2019 November 6, 2019 Tulsipur Khabar